बैंकिङ रोजगारी Archives ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले व्यवस्थापकीय र अफिसर तहका विभिन्न १४ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । सबै पदका लागि अनुभव मागिएको छ भने उमेर हद पनि …
देवः विकास बैंक +२ पासलाई रोजगारी !
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक देवः विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो नारायणगढ शाखाका लागि गोल्ड टेस्टर माग गरेको छ । प्लस दुई उतीर्ण, दुई वर्षको अनुभव, ५० वर्षभन्दा कम उमेर र दुई पाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्स भएका व्यक्तिले एसिस्टेन्ट लेभलसरहको …
एनआईसी एशिया बैंकमा खुल्यो ठूलो संख्यामा रोजगारी
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले विभिन्न सात पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले केही कर्मचारी उपत्यकाभित्रका लागि र केही कर्मचारी उपत्यकाबाहिरका लागि मागेको छ । इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिलाई २७ डिसेम्बरभित्र एप्लाई गरिसक्न आह्वान गरिएको छ …
१० कक्षा पासलाई नेपाल बैंकमा रोजगारी !
बैंकिङ खबर । नेपालको जेठो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडमा जागीर खुलेको छ । बैंकले आफ्ना मुलुकभरका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुका लागि तहविहीन संचारवाहक पदमा ४६ जना कर्मचारी माग गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि ८ जना मागिएको छ भने बाँकी उपत्यकाबाहिरका …
बैंकिङ एक्स्पोले माग्यो भोलुन्टेयर कर्मचारी
बैंकिङ खबर । वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गतको बैंकिङ एक्स्पो कार्यक्रमले भोलुन्टेयर कर्मचारी माग गरेको छ । विभिन्न समयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हुने एक्स्पोका लागि दुई दर्जन कर्मचारी माग गरिएको हो । यही पुस १४, १५ र १६ गते इटहरीमा …
देवः विकास बैंकमा प्लस दुई उतीर्णलाई जागीर !
बैंकिङ खबर । देवः विकास बैंक लिमिटेडमा जागीर खुलेको छ । बैंकले प्लस दुई उतीर्ण गरेको र उमेर ५० वर्ष ननाघेको कर्मचारी मागेको छ । गोल्ड टेस्टरको पदका लागि दुई वर्षको कार्यअनुभव समेत भएको कर्मचारी मागिएको हो । इच्छुक तथा …
बैंकमा जागीर खानेको व्यथा : हामी त तल्लो स्तरको नागरिक भयौँ
बैंकिङ खबर । धादिङका हरिहर थापा अहिले ५७ वर्ष लागे । उनी अहिले धर्मपथस्थित नेपाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत छन् । उमेरले ५६ काटेपनि अझै सुगठित देखिने उनी २० वर्ष इन्डीयन आर्मीका अनुभवि सीपाही पनि हुन् । …
नविल बैंकमा रोजगारी खुल्यो
बैंकिङ खबर । नविल बैंक लिमिटेडमा ठूलो संख्यामा रोजगारी खुलेको छ । बैंकले मेनेजर र अफिसर लेभलमा विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको हो । इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई १३ डिसेम्बरभित्रमा एप्लाई गरिसक्न आह्वान गरिएको छ । थप जानकारीका …
बैंकिङ रोजगारीका लागि स्वर्णिम समय : भ्याकेन्सी खुलेका आधा दर्जन बैंकहरु
बैंकिङ खबर । मेगा बैंक लिमिटेडमा जागीरका लागि एप्लाई गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । आज साँझ ५ बजेसम्ममा एप्लाई गरिसक्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । मेगाले शाखा प्रबन्धक सहित २९ जना अधिकृत र ६६ जना सहायक अधिकृत गरी एक …
गरिमा विकास बैंकमा जागीर खुल्यो, यसरी गर्नुहोस् तयारी
बैंकिङ खबर । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले झापा, मोरङ र सुनसरीमा खोल्न लागिएका शाखाहरुका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले अधिकृत र सहायक स्तरका कर्मचारी मागेको छ । अधिकृतका लागि स्नातक वा सोसरहको शैक्षिक योग्यताको साथमा दुई वर्षको अनुभव …